छोरा खोज्दै ज्योतिषकोमा ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
छोरा खोज्दै ज्योतिषकोमा !
लगातार छोरी जन्मेर छोराको खोजी गर्नेहरू नै परामर्श लिन बढी आउने गरेको कोइरालाको अनुभव छ । पाँच जनासम्म छोरी जन्मेपछि सन्तान नजन्माउने भनेर बसेकाहरू उमेरले ४५ कटेपछि पनि छोरा हुन्छ कि हेरिदिनुप-यो भनेर आउने गर्छन् ।
छोराको खोजीमा गर्भपतनदेखि ज्योतिषको परामर्श केन्द्रसम्म पुग्नेहरू छोरी हुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिलेसम्म आएकै छैनन् । ज्योतिषहरू जन्मकुण्डली हेरेर सन्तान प्राप्तिको योग हेर्छन् । जन्मकुण्डलीमा सन्तान खण्डका बाह्र भावहरूको जोडघटाउ गरेर सन्तान प्राप्तिको फलादेश थाहा पाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । मान्छेले जन्म लिँदा भएको ब्रह्माण्डका ग्रह तथा नक्षत्रको गति र तिनले पार्ने प्रभावका आधारमा बन्ने जन्मकुण्डलीका विभिन्न ग्रहका आचरणका आधारमा छोरा वा छोरी हुने ज्योतिषीय हिसाब निकाल्न सकिन्छ । जन्मेको समय जस्ताको तस्तै मिलाएर बनाएका चिनामा हेरेको फलादेशले छोरा वा छोरी के हुने भनेर सजिलै थाहा हुने बताउने उनी छोराकै प्राप्तिका लागि दौडधुप गर्ने कुरामा भने मन पराउँदैनन् । उनले ग्यारेन्टी गरेर छोरा वा छोरी हुन्छ भनेर अहिलेसम्म नभनेको बताए । (संचारिका फिचर सेवा)(विराट, इटहरीमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।)